မန်းဂေဇက်ရောဂါ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » မန်းဂေဇက်ရောဂါ
Posted by shwe pont on Feb 13, 2012 in Copy/Paste | 28 comments
မန်းဂေဇက်ရောဂါ လို ့နာမည်ပေးလိုက်ရတာက ကိုယ့်အကြောင်းနဲ ့ကိုယ်ပါ။ မိတ်ဆက်စာရေးပြီးကတည်းက စာမရေးဖြစ်ဘဲ ထုံးစံအတိုင်းစာပဲ နေ ့တိုင်းဝင်ဖတ်ဖြစ်နေခဲ့တာပါ။ ဒီကြားထဲ အကြောင်းပြချက်များစွာနဲ ့စာပဲကမန်းကတန်းဖတ်ပြီး၊ စာရေးမယ်စိတ်ကူးနဲ ့ကိုယ်တိုင်မိတ်ဆက်ပြီးမှရေးချင်တဲ့အကြောင်းအရာကလည်း ခေါင်းထဲမရောက်သေးတာရယ်။ အင်တာနက်ကို သုံးစွဲတဲ့အချိန်ရယ် အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ကြန် ့ကြာမှုများစွာနဲ ့စာဖတ်ပရိတ်သတ်ဘဝမှာဘဲသံသရာလည်နေတုန်းမှာပဲ ဒီနေ့ဘလက်ချောရဲ့မန်းဂေဇက်ရဲ့ပထမဆုံးစုပေါင်းအလှူပွဲ ဓါတ်ပုံများနဲ ့တကွ စည်းလုံးမှုကို မြင်ရ ချိန်မှာ ကျွန်မရောဂါအကြီးအကျယ်တက်လာပါတော့တယ်။ အဲဒါကတော့ မန်းဂေဇက်ရွာသူ ရွာသားစစ်ဖြစ် ချင်တဲ့ရောဂါပါ ။
မန်းဂေဇက် စီနီယာများကနွေးထွေးလှိုက်လှဲစွာ ရွာခံပီသစွာနဲ ့ကြိုဆိုခဲ့ကြပေမဲ့ ကျမကခဏမျက်နှာလာပြပြီးပြန်သွားတဲ့ဧည့်သည်လိုဖြစ်နေခဲ့တော့… ရွာသူရွာသားတွေ ဓါတ်ပုံကြည့်ပြီး စည်းလုံးမှုကိုအားကျတာရယ် ဒီလို တကယ်လိုအပ်နေတဲ့လူတွေရဲ ့အခက်အခဲကိုကူညီဖြေရှင်းပြီး စိတ်ရောကိုယ်ပါကြိုးစား ပြီးလုပ်နေတဲ့ ဦးကျော်သူတို ့ကို ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ တဒေါင့်တနေရာကနေ အားဖြည့်ကြတာလေးကို ကြည်နူးမိတာလေးရယ်ကြောင့် ဒီနေ ့တစ်ခေါက်ရွာကိုထပ်လာတာပါ ။
ဓါတ်ပုံကြည့်လိုက် နာမည်ကြည့်လိုက်နဲ ့အကုန်လုံးကိုတော့မမှတ်မိသေးဘူး။ AKKO ရယ်၊ အန်တီပဒုမ ာရယ်၊ အုပ်ထိမ်းသူနဲ့လာတဲ့ ကိုရွှေတိုက်စိုးရယ် ဆံပင်ကောက်ထားတဲ့နွယ်ပင်ရယ်၊ နာမည်နဲ ့လိုက်တဲ့ ကိုဖက်တီးရယ် နဲ ့တခြားသူတွေကိုတော့မှတ်မိအောင်ကြည့်တုန်း … မျက်မှန်နက်ကြီးနဲ ့က ဘလက် ချောလို ့ထင်တာပဲ ။
မန်းဂေဇက်အလှူကိုကြည့်ပြီး ပီတိလည်းဖြစ်၊ သာဓုလည်းခေါ်၊ နောက်တစ်ခါအလှူမှာကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရင်း။ ရွာကိုတစ်ခေါက်ထပ်လာသွားပါသည်။ အိမ်ရှင်များ မြန်မာ ချစ်စရာ့ဓလေ့အတိုင်း ရွာထဲလာတဲ့ဧည့်သည်ကို ထမင်းလေးဖိတ်ကျွေး၊ ရေနွေးကြမ်း၊ လက်ဘက်သုတ်လေးနဲ့ခေါ်ဧည့်ခံကြပါဦး။ ဟွန့်ဧည့်သည်ကပြောနေရတယ်။
ရပါတယ်ဗျာ ကျွန်တော်တို့မန်းလေးသားတွေက လက်ဖက်နဲ့ရေနွေးကြမ်း၊ ထန်းလျက်
နေ့လည်စာ ကြက်သားကာလာသားလေးနဲ့ ဆိတ်သားစစ်အခြောက်ဖုတ်၊
ညအတွက် ထန်းရည်စစ်လေးနဲ့ မြည်းစရာ။
လာရဲဝူး သရဲကြောက်တယ်။ လသာသာမှာ မန်ကျည်းပင်အုပ်ဆိုင်းဆိုင်းနဲ ့ဆိုတော့ ကျောချမ်းစရာ
ဖရဲ ဖရဲ အဲ သရဲ သရဲ
ကိုရွှေပုံရေ ဒီရွာထဲမှာ နေမယ် စိတ်ကူးရင်တော့ များအနေနဲ့ ခင်လို့သတိပေးချင်တယ် ..သိလား..
ဖရဲသီးလုံးဝမစားပါနဲ့.. နောက်တစ်ယောက်က မိစိန်ပေါက်ပဲ…အဲ့ဒီ့ကောင်မက အရမ်းအဆဲသန်တယ်..
နောက်..ကြောင်ကြီးကိုဂရုစိုက် သူကလည်းအလစ် ဝင်ဝင်ခုတ်တတ်တယ်…ကိုပုတို့ ကိုဖြိုးတို့တော့ ဂရုစိုက်စရာမလိုပါဘူးကွယ်…သူတို့က ရွှေပုံ့ကိုစိတ်ဝင်စားမှာမဟုတ်ပါဘူး..အံစာတုံးလည်းမကစားနဲ့နော်..သူလည်းခေသူမဟုတ်ဘူး..ခင်ချင်းခင် .
သူ ့ဘာသာအဝှာပြုချင်တဲ့လူပြုမှာပေါ့ ညည်းက ကြားထဲက ဘာပြုလို ့အဝှာလိုက်ပြုနေရတာလဲ
အမလေး ကြီးမိုက်ဆိုတဲ့ လူကြီးက ကြိတ်ပိုးကြီး
အခင်လုံးနဲ ့ခင်ချင်လို ့ရွာထဲရောက်လာတာလေ
နာမည်က ကြီးမိုက်ဆိုတော့… ငယ်ငယ်တော့ လိမ္မာခဲ့သေးတာလို့ဆိုလိုတာလား အမ
အဂ္ဂမဟာသရေစည်သူ၊ အဂ္ဂမဟာသီရိသုဓမ္မ၊ သီရိပျံချီ KING says:
ဟိုလူမကောင်းဘူး ဒီလူမကောင်းဘူးလို့ မပြောဘူး
ဘွဲ့တွေကို ယုံပြီး ပုံအပ်လိုက်ပါ
ဘီလျံ သိန်းဂဏန်းလောက်မှ လိမ်ပြေးမယ့်
ပုလင်းမထောင်တဲ့ မင်းကောင် …
ကိုရွှေပုံ့ရယ် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဧည့်သည်လို့ သဘောမထားပါနဲ့ ၊
ကို -လား မသိ၊ မ- လား မသိတဲ့ ရွှေပုံ့ရေ-
အင်းးးးးးးးး မသိတာပဲ ကောင်းပါတယ်။
ကို- လား၊မ- လား သိသွားရင်တော့……..
ကို – က မ- ဖြစ်သွားမယ်။
မ- က ကို- ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော့ စိတ်ထင် ကိုကြီးရွှေ ရဲ့ ပထမ ဆုံး ပိုစ့် က .. မိတ်ဆက် တဲ့ပိုစ့် လား လို့ ပါ
မျက်မှန် နက်ကြီး နဲ့ က ဆိုလို့ .. အဲ့နေ့က လွှတ် ပဲများထားတဲ့ သုံးယောက် ရှိပါ့။ မျက်မှန် နက် ကြီးတွေနဲ့ ပေါ့ .. :-( ဓာတ်ပုံ ကြီးတက်လာမှ . ရှက်ထှာ …
Mလုလင်ကို နာမည်နဲ ့တကွဖော်ပြထားလို ့သိလိုက်ပါတယ်။
ကျမရဲ ့ပထမပို ့စ်က မိတ်ဆက်တဲ့ပို ့စ်ဟုတ်ပါတယ်။
ဒါနဲ ့ဘယ့်နှယ် ကိုကြီးရွှေဖြစ်သွားရတာတုန်း
ရွှေပုံ့ရေ – မနေ့ က မဝေက အာလူးဆနွင်းမကင်း၊ ဒီနေ့ မပဒုမ္မာက မုန့်ပျားသလက်။ နဲ့ဧည့်ခံတယ်။
ရွာထဲက သူငယ်ယောင်ဆောင်ထားတဲ့ သူငယ်မ လေးတွေက အတော်လက်သွက်တော့ ကုန်သွားမယ်။
ရွာထဲကို အားတိုင်းလာလည်ဖို့ ထပ်ပြီးဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ :-)
အပေါ်က စိန်ပေါက်ပေါက်တို့ တသိုက်ကလွဲရင် ရွာသူား တွေက
ရွှေပုံ့ အနေမကျုံ့ရအောင် အကျန်တော့ ပေးချင်တယ်။ အားနာလို့ပါ..
ရွာထဲမှာ ပိုစ်တခု တင်လိုက်တယ် ဆိုကတည်းက ကိုယ်ပိုင် မြေတကွက် ရသွားပြီ။ လုပ်ချင်ရာသာ လုပ်ပေတော့.. ပိုစ်များများ တင်ရင် မြေကွက် ကြီးကြီး ရတယ်လို့ သဘောထား.. သဂျီးတောင် ပိုစ်မတင်လို့ မြေပျောက်နေတယ် ကြားတယ်။ ဟိဟိ
မန်းဂေဇက်မြေကွက်ကရောင်းစားလို ့ရလားဟင် မြေဈေးကောင်းနေတော့ ခုနေထုတ်လိုက်ရင် ဟန်ကျမလားလို ့
မရွှေပုံ့ရေ .. ဂေဇက်ရောဂါစွဲတာက … ဆေးစွဲတာထက် ပိုဆိုးတယ် … ။
မနက်စောစော ဝက်ဘ်ဆိုက်ဖွင့်မရလျှင်ကို လူက ဒေါသထွက်နေတာ … ။ တစ်ခါတစ်လေ …ရသ စာရေးသူတွေ အရေးသားကောင်းလွန်းလို့လည်း … အဲ့ဒီပို့စ်ထဲမှာ ကိုယ်တိုင်ဝင်ခံစားမိပြန်ရော … တစ်ချို့သတင်းတွေတင်တာ မြန်လွန်းတော့လည်း … အချိန်နဲ့တပြေးညီ ဘာတွေ ဘယ်မှာဖြစ်နေတယ် သိရပြန်ရော … ။
ဂေဇက်စွဲတဲ့ရောဂါကတော့ … အင်တာနက်သုံးနေသရွှေ့ ဘယ်တော့မှ ပျောက်မှာ မဟုတ်ဘူး .. မရွှေပုံ ့ရေ … အဲ့ဒါကိုယ်တွေ့..
တစ်ခါတစ်လေ ရွာဆူရင်တော့ နေသာသလိုကြည့်ကြက်ပြီး ချောင်ကပ်နေပါနော်။
ဂေဇက်ရောဂါစွဲတာ မရွှေပုံ့တင် မဟုတ်ပါဘူး နွယ်ပင်တို့ပါ စွဲနေတာပါ
မနက်မိုးလင်းလို့ Computer ဖွင့်တာနဲ့ အရင်ဆုံးတန်းဖွင့်မိတာက
ဒီဆိုဒ်ကိုပဲ တစ်နေ့ တစ်လေလေးများ မအားလို့ မကြည့်ဖြစ်ရင်
မနေနိုင်မထိုင်နိုင်ကိုဖြစ်လို့ .. ဟိုနေသွားလည်း လက်ကကင်မရာတစ်ကိုင်ကိုင်
ဒီနေရာသွားလည်း လက်က ကင်မရာတစ်ကိုင်ကိုင်နဲ့ ရွာထဲကို မျှဝေချင်တဲ့စိတ်က
ကြီးလွန်းနေပြန်ရော … မရွှေပုံ့လဲ ရွာထဲကို အချိန်ရတိုင်းလာလည်ပါလို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နော် ….
ဖေ မုန် ့ပြမယ်
ရွှေပုံ့ထကွယ်
မုန် ့စားဖို ့။
windtalker ရေ ခဏလေး အိမ်သယ်ဖို ့ကျွတ်ကျွတ်အိတ်လေးပါယူလိုက်ဦးမယ် ဟီး
ရွှေပုံ့ .တွေ့လား ..ဒို့ရွှာကဘယ်လောက် ခင်စရာကောင်းလည်း ဧည့်ဝတ်ကြေလည်းဆိုတာ…
အနန္တ စကြဝဠာ မဟာရာဇာ အံစာတုံး says:
အင်း .. ရောဂါ .. ရောဂါ …
ကျုပ်လည်း လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်လလောက်တုန်းက ရွာသား အစစ် ဟုတ်ခဲ့ဖူးဗျာ။
ရွာထဲမှာ ပို့စ်တွေတော့ တင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ဧည့်ပို့စ်လို့ ပြောရမှာပါပဲ။ ကိုယ့်တင်ခဲ့တဲ့ပို့စ်ကို ဘယ်သူတွေ မန့်မှန်းလည်း မသိ၊ ကိုယ်ကလည်း ဘာမှ ပြန်ပြီး မပြောတတ်ခဲ့ပါဘူးဗျာ။ အဲ … ဘယ်သူ မန့်မှန်း မသိဆိုမှ အဲဒီတုန်းက Kai ဆိုတာ သဂျီးမှန်းကို မသိခဲ့တာဗျ။ အခုတော့ ရွာထဲက လူအတော်များများကို သိနေပါပြီ။ ( အပေါ်က အံစာတုံး ကစားနဲ့ဆိုတဲ့ လူကိုတော့ သိဝူးထားလိုက် … )
ရွာထဲနေရတာ အခု ကျုပ်ပျော်နေပြီဗျို့။ ရွာထဲ တစ်နေ့ မဝင်ရ၊ မဖတ်ရရင် နေကိုမနေနိုင်တော့တာ။ အဲဒါ ကျုပ်ရဲ့ ရောဂါပဲ …။
ထမင်းလေးဖိတ်ကျွေး၊ ရေနွေးကြမ်း၊ လက်ဘက်သုတ်လေး တစ်ခုမှမရှိဘူး ဘောပွဲရှုံးလို့ ညစ်ညစ်နဲ့ထောင်ထားတဲ့ BE ပဲရှိတယ် ကြိုက်ရင် ဝင်မောလေ